ရော်ဂျာမိုးအား ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် တွေ့ရပုံ
ရော်ဂျာ ဂျော့ချ် မိုး
(1927-10-14)၁၄ အောက်တိုဘာ၊ ၁၉၂၇
စတော့ခ်ဝဲလ်, လန်ဒန်မြို့, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း
၂၃ မေ၊ ၂၀၁၇(2017-05-23) (အသက် ၈၉)
Cremated; ashes scattered in Monaco
ဒွန် ဗန် စတေး (m. 1946; div. 1953)
ဒေါ်ရသီ စကွိုင်းယား (m. 1953; div. 1968)
လွီဇာ မာတီယိုလီ (m. 1969; div. 1996)
ခရစ်စတီးနား သောစထရပ်ပ် (m. 2002; his death 2017)
သား ၂ ဦး၊ သမီး ၁ ဦး
George Alfred Moore
ဆာရော်ဂျာ ဂျော့ချ် မိုး ကေဘီအီး (၁၄ အောက်တိုဘာ ၁၉၂၇ - ၂၃ မေ ၂၀၁၇) သည် အင်္ဂလိပ် ရုပ်ရှင်မင်းသား တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည် ဗြိတိသျှ လျို့ဝှက်အေးဂျင့် ဂျိမ်းစ်ဘွန်း အဖြစ် ၁၉၇၃ ခုနှစ်နှင့် ၁၉၈၅ ခုကြား ရုပ်ရှင် ၇ ခုတွင် ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ၁၉၆၂ နှင့် ၁၉၆၉ ကြားတွင် ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ သည်စိန့် (The Saint) တွင် ဆိုင်မွန် တမ်ပလာ (Simon Templar) အဖြစ် ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ရော်ဂျာမိုးသည် ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် ရှောင်ကွန်နရီ ထံမှ ဂျိမ်းစ်ဘွန်း ဇာတ်ကောင်စရိုက်ကို လွှဲပြောင်း ရယူခဲ့ပြီး ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် လစ်ဗ်အင်န်လက်ဒိုင်း (Live and Let Die) ရုပ်ရှင်တွင် ဇီးရိုးဇီးရိုးဆဲဗင်း အဖြစ် ပထမဆုံး ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ယနေ့အထိ ဂျိမ်းစ်ဘွန်း မင်းသား သက်တမ်း အရှည်ဆုံး ဖြစ်ပြီး နောက်ထပ် ရုပ်ရှင် ၆ ကားတွင် ဂျိမ်းစ်ဘွန်း အဖြစ် ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ရော်ဂျာမိုးအား အဲလိဇဘက် ဘုရင်မ ၂ မှ ပရဟိတလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကြောင့် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် နိုက် အဖြစ် သူကောင်းပြုခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ပြင်သစ် အစိုးရမှ ရော်ဂျာမိုးအား အနုပညာတွင် စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်နိုင်သူအဖြစ် Ordre des Arts et des Lettres ၏ ကွန်မန်ဒါ ဘွဲ့ အပ်နှင်းချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
ရော်ဂျာမိုးအား ၁၉၂၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၄ တွင် လန်ဒန်မြို့ စတော့ခ်ဝဲလ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူသည် ရဲသား ဖြစ်သူ ဖခင် ဂျော့ချ်အဲဖရက်မိုး (၁၉၀၄-၁၉၉၇) နှင့် မိခင် လီလီယံ လီလီ ပုပ် (၁၉၀၄-၁၉၈၆) တို့၏ တစ်ဦးတည်းသော သားဖြစ်သည်။ သူ၏ မိခင်မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကာလကတ္တားမြို့တွင် မွေးဖွားသော်လည်း အင်္ဂလိပ်လူမျိုးပင် ဖြစ်သည်။ သူသည် ဘက်တားဆီး ဂရမ်မာကျောင်းတွင် ပညာသင်ခဲ့ပြီး ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ဖြစ်ပွားချိန်တွင် ဒီဗွန်ဒေသ ဟိုးဝေါ်သီမြို့ သို့ စစ်ဘေးရှောင်ခဲ့ကာ ကွန်းဝေါလ် လောန်ဆက်စတန် ကောလိပ်တွင် ဆက်လက် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဘက်ကင်ဟမ် ရှိုင်းယားနယ် အမာရှမ်ရှိ ဒေါက်တာ ချယ်လွန်နာ ဂရမ်မာကျောင်းတွင် ဆက်လက် ပညာသင်ယူခဲ့ကာ ဒါဟမ်းတက္ကသိုလ် တွင် ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့သော်လည်း ဘွဲ့မရခဲ့ပေ။
ရော်ဂျာမိုးသည် အန်နီမေးရှင်း စတူဒီယို တစ်ခုတွင် ပညာသင် အဖြစ် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သော်လည်း အမှားလုပ်မိ၍ အလုပ်ထုတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ သူ၏ ဖခင်မှ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ ဘရိုင်ယန် ဒက်စမွန် ဟပ်စ်၏ အိမ်တွင် ဖြစ်ပွားသော ဓားပြမှုကို စုံစမ်းထောက်လှမ်းရာမှ တဆင့် ရော်ဂျာမိုးသည် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာနှင့် သိကျွမ်းခဲ့ပြီး ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင် ရိုက်ကူးသော ဆီဇာ နှင့် ကလီယိုပါထရာ ရုပ်ရှင်ကားတွင် ဇာတ်ရံအဖြစ် ငှားရမ်း ခံခဲ့ရသည်။ ထိုဇာတ်ကားတွင် ရော်ဂျာမိုးသည် ပြင်ပ အမျိုးသမီးပရိသတ် အား ဆွဲဆောင်မှု အားကောင်းကြောင်း သတိထားမိ၍ ဒါရိုက်တာဟတ်စ်မှ ရော်ဂျာမိုးအား တော်ဝင်ပြဇာတ်အနုပညာ အကယ်ဒမီတွင် တက်ရောက်ရန် ကျောင်းစရိတ် ကုန်ကျခံခဲ့သည်။ ရော်ဂျာမိုးသည် ထိုကျောင်းတွင် ၃ နှစ်မျှ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
အသက် ၁၈ နှစ် ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ပြီးသော အခါတွင် ရော်ဂျာမိုးသည် စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေကြောင့် စစ်မှုထမ်းခဲ့ရသည်။ ၁၉၄၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် တော်ဝင်ကြည်းတပ်တွင် ဒုဗိုလ် အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ သူ၏ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်မှာ ၃၇၂ ၃၉၄ ဖြစ်သည်။ သူသည် စုပေါင်း ဖျော်ဖြေရေးတပ်တွင် အရာရှိဖြစ်ခဲ့ပြီး ဗိုလ်ကြီးအဆင့် အထိ ရာထူး တိုးမြှင့်ခြင်း ခံခဲ့ရပြီး အနောက်ဂျာမနီရှိ စစ်တပ် စတို အသေးစား တစ်ခုအား ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ဟမ်းဘတ်မြို့အား ဖြစ်သွားသော ဖျော်ဖြေရေးသမားများအား စစ်တပ်ကိုယ်စား ကြည့်ရှု စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့သည်။